Voamariky ny fanovana lalampanorenana sy ny tsy fitokisana ny filazana fifidianana ao Angola · Global Voices teny Malagasy
Tamin'ny volana Aogoditra 2017 ny fifidianana farany
Voadika ny 18 Septambra 2021 4:34 GMT
João Lourenço, filohan'i of Angola | Sary: Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0
Miomana ho amin'ny fifidianana ny filohany manaraka i Angola amin'ny volana Aogositra 2022, tao anatin'ny resabe momba ny lalàna mifehy ny fifidianana efa an-dalana. Mikasa ny hofidiana indray amin'ny taona hoavy ny mpandresy tamin'ny taona 2017, ny filoha João Lourenço ankehitriny.
Hanamarika ny fotoanan'ny tetezamita sy ny fanamafisana ny fifidianana manaraka, satria lasa filoham-pirenena i João Lourenço taorian'ny nitondran'i José Eduardo dos Santos nandritra ny 30 taona – iray amin'ireo filoham-pirenena teo amin'ny fitondrana ela indrindra.
Fantatra tamin'ny fitantanan-draharaham-pahefana didy jadona i Dos Santos, nomarihan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny fameperana ny fahalalahana miteny sy ny fahalalahana an-gazety. Betsaka no nahita ny trangan-keloka bevava tamin'ny taona 2016, izay nisamboran'ny mpitandro ny filaminana vondrona mpikatroka fo sy nitazonana azy ireo tamin'ny fiampangana nampanontany tena, ho tandindon'ny fitondrany amin'ny ankapobe. Nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe “15+2″ ilay tranga, manondro ny nitazomana am- ponja vonjimaika ireo mpikatroka nosamborina miisa 15 tamin'ireo 17.
Niteraka adihevitra teo amin'ireo Angoley ny fifidianana 2022 hatao volana Aogositra. Ho an'ireo mpifidy, nisy ny tsy fitokisana ny fomba nitantanana ny dingana sy ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana tamin'ny fanitsiana ny lalàmpanorenana vao haingana momba ny fifidianana hoavy.
Milaza ny fanitsiana ny lalàmpanorenana tamin'ny 2010 fa afaka mifidy ny vahiny amin'ny fifidianana manaraka, araka ny notaterin'ny Jornal de Negócios.
Ankoatra izay, nosokafan'ny làlana ny lalana mankany amin'ny fifidianana isa-toerana, nametrahana fe-potoana voafaritra amin'ny fifidianana ankapobeny, ary manolotra amin'ny Banky Nasionaly ao Angola ny fahaleovantena amin'ny fanaraha-mason'ny mpanohana antoko.
… Ity fanitsiana ity dia mamaritra, ankoatra ny rafitra lalàmpanorenana hafa, ny fanaraha-maso ara-politika ataon'ny Antenimieram-pirenena amin'ny fahefana mpanatanteraka, ary ny fanitarana ny zon'ny mpifidy Angoley monina ivelan'ny firenena.
Saingy tamin'ny 2 Septambra, niantso ny filoha João Lourenço handà ny fankatoavana ny lalàm-pifidianana ankapobeny ny antoko mpanohitra ary hamerina izany any amin'ny Antenimieram-pirenena. Niantso ny lalàna ho “lalànan'ny hosoka sy kolikoly amin'ny fifidianana” ny solontenan'ny vondrona parlemantera UNITA, CASA-CE, PRS, sy Bloco Democrático, ary ireo parlemantera tsy miankina koa.
Andro vitsy talohan'ny fankatoavana vao haingana dia efa nanome toky i João Lourenço fa hisy ny fifidianana, mba hialana amin'ny ahiahy fa mety ho foanana noho ny antony samihafa.
Nanambara ny antoko mpanohitra fa norahonan'ny manampahefana, toy izany koa ireo mpikatroka nitaky ny mangarahara amin'ny fifidianana, toy ny tranga notaterina tamin'ny 30 Aogositra:
Nitaraina ireo tanora mpanao fihetsiketsehana ao Luanda fa nosakanan'ny polisy nasionaly tsy hivory eo anoloan'ny Antenimieram-pirenena, izay nikasan'izy ireo “hitakiana ny fahamarinana sy ny mangarahara” amin'ny adihevitra momba ny fanitsiana ny lalàm-pifidianana.
Tamin'ny andron'ny fihetsiketsehana, nitaraina noho ny fihetsiky ny polisy ireo tanora mpikatroka nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny Deutsche Welle:
Manakana ny diabenay indray ny polisy, mikasa ny hanatratra ny vavahady atsimo ao amin'ny Antenimieram-pirenena izahay mba hahafahanay manao ny fihetsiketsehana izay mikendry ny hitakiana ny depiote hifidy ny lalàna ara-drariny afaka manome antoka ny fifidianana mangarahara eto amin'ny firenentsika.
Eo amin'ny paikady, niezaka niara-niasa ny antoko mpanohitra mba hanangana mandatehezana manohitra ny fifidianana 2022, araka ny tatitra nataon'ny VOA hoe:
Mamarana ny fananganana ny Mandatehezana Tia Tanindrazana ny antoko mpanohitra lehibe indrindra, UNITA, miaraka amin'ny Bloco Democrático ary ny tetikasa Pra-Já Servir Angola, mikendry ny hitodika amin'ny fifidianana 2022 miaraka amin'ny vondrona tafaray hanohitra ny MPLA.